प्लस टु पछि के पढ्ने ? परामर्श घरैमा
शैक्षिक मेला भन्ने सुन्दा धेरै मानिसले कुनै ठाउँमा मान्छे भेला हुने र शिक्षासम्बन्धी जानकारी, परामर्श वा शैक्षिक सामग्रीकाे प्रदर्शन भन्ने बुझ्छन् । तर, डिजिटल पत्रिका शिलापत्रले घरबाटै अवलोकन गर्न सकिने यस्ताे खालकाे भर्चुअल शैक्षिक मेला सञ्चालन गरिरहेकाे छ । याे मेलामा सहभागी हुन, जानकारी वा परामर्श लिन कुनै भीडमा जान वा भाैतिक उपस्थिति जनाउनैपर्दैन ।
स्नातक तहमा कुन विषय कहाँ पढ्ने भन्ने खोजीमा हुनुहुन्छ भने भर्चुअल शैक्षिक मेलामा जोडिन सक्नुहुन्छ । विषयको महत्त्व र कलेजका विषयमा सम्पूर्ण जानकारी भर्चुअल शैक्षिक मेलाबाट लिन सकिन्छ, त्याे पनि तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर ।
दोस्रो भर्चुअल शैक्षिक मेला आइतबारदेखि सुरु भएको छ । स्नातक तहमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि लक्षित गरेर मेलाको आयोजना गरिएको भर्चुअल शैक्षिक मेलाका संयोजक सुरेश सिम्खडाले जनाकारी दिए । एडुफेयरमा विद्यार्थी तथा अभिभावकले शैक्षिक संस्थाको भौतिक संरचनाको ‘थ्रीडी इमेज’मार्फत भर्चुअल टुर गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए ।
घरै बसीबसी चाहेको शैक्षिक संस्थाको लबी, ल्याब, लाइब्रेरी, कक्षाकोठा, हलदेखि सबै संरचना र सुविधाका विषयमा बुझ्न सकिन्छ, संयाेजक सिम्खडाले भने ।
उनका अनुसार इन्टरनेटको पहुँच भएको जुनसुकै ठाउँबाट पनि सहभागिता जनाउन सकिनेछ । यस्तै, घरबाटै सबै कलेज टुर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
नेपालबाट मात्र हाेइन, विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि विद्यार्थी र अभिभावकले जानकारी लिन सक्ने उनकाे भनाइ छ । याे मेलासँगै विद्यार्थीले पढ्न चाहेकाे संकायबारे कलेजमै गएर बुझ्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
‘डिजिटल नेपालको अवधारणअनुसार भर्चुअल शैक्षिक मेलाको आयोजना गरेका हौं,’ सिम्खडाले भने, विद्यार्थी, अभिभावक र कलेजहरुबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ ।’
मेलाबाट इन्जिनियरिङ, फुड टेक्नोलोजी, बी फार्म, बायो मेडिकल, डेभलपमेन्ट स्टडिजलगायतका विषयमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सकिनेछ । उनका अनुसार याे भर्चुअल शैक्षिक मेला नेपालको पहिलो हो ।
डिजिटल शिक्षाको युग
‘टेक्नोलोजीको युगमा घरमै बसेर सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नु शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तन हो,’ कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य सुधीर गुरागाईंले भने, भर्चुअल मेलाले सम्पूर्ण जानकारी दिन सक्नुपर्छ ।’
विद्यार्थीलई कलेज र विषय छनोटका लागि सहजीकरण गर्न भर्चुअल शैक्षिक मेला फलदायी हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष धनप्रसाद पौडेलले भर्चुअल शैक्षिक मेलाबाट विद्यार्थीले फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताए ।
‘हातहातमा मोबाइल र इन्टरनेट जोडिएको छ । एक क्लिक गर्दा सबै जानकारी लिन सकिन्छ,’ उनले भने, यसलाई विद्यार्थीले अधिकतम प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’
मोर्डन टेक्नोलोजी कलेज
नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ
कलेज अफ इनफर्मेसन, टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङ
कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज
कान्तिपुर सिटी कलेज
ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेज
एड्भान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट
एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेज
कान्तिपुर इन्टरनेसनल कलेज
फ्ल्इटेक इन्टरनेसनल कलेज
कलेज अफ एप्लाइड फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी
यु टेक कलेज
नेपाल पोलिटेक्निकल कलेज
सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेज
शिलापत्र डटकमले मेलाको आयोजना गरेको हो । शिलापत्रले विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्न स्नातक तहका झन्डै ५० वटा विषयका विषयमा सामग्रीसमेत तयार पारेको छ । विज्ञको समूह बनाएर शिलापत्रले शैक्षिक सामग्री बनाएको हो । कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ’प्लस टु पछिको गन्तव्य ’ स्तम्भ सुरु गरेको हो ।
भर्चुअल शैक्षिक मेलामा मिटिङ प्वाइन्टको व्यवस्थापन र नयाँ पत्रिकाको सहकार्य छ । मेला ३ भदौसम्म चल्नेछ । यसलगत्तै ५० भन्दा बढी क्याम्पसलाई समेटेर मेलाको आयोजना गरिनेछ । यसअघि गत असारमा ११ कक्षाका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको मेलामा २ लाख बढीले अवलाेकन गरेका थिए ।
भर्चुअल मेला भिजिट गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् :
Nepal Edu Fair 2019
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २७, २०७६, ०५:१२:००